२०७७ पुष २४ गते शुक्रबारको राशिफल - SangaloKhabar
२०७७ पुष २४ गते शुक्रबारको राशिफल
बि.सं.२०७७ साल पुष २४ गते शुक्रबार ई. सं. २०२१ जनवरी ८ नेपाल सम्बत ११४१ थिंलाथ्व दशमी, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पुष कृष्ण दशमी, चन्द्रमा तुला राशिमा, स्वाति नक्षत्र २ः.३४ सम्म त्यसपछि विशाखा नक्षत्र, धृति योग ६ः२९ सम्म त्यसपछि शूल योग, वणिज करण ११ः१४ सम्म त्यसपछि बव करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०६ः५६ बजे, सूर्यास्त साँझ ५ः२६ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको तुला राशि हुनेछ । आज महत्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा जौ मुखमा राखेर जुनसकै दिशाको यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आज नेपाल ज्योतिषपरिषद् स्थापना दिवश परेको छ । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ८ बजेर १५ मिनेट देखि १० बजेर ५२ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा पनि अन्तर हुनेछ ।
आत्मबल र उत्साहमा बृद्धि हुने दिन छ । उचित समयमा गरिएको निर्णयले उम्किन लागेको काम बन्नेछ । आफन्तजनसँग आत्मीयता बढ्ने छ । तर्क, विवाद र बहसमा विजयी भइने छ । आशा गरेअनुरूप सहयोगी जुट्ने छा। गरेको प्रयासमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई पालना गर्दा खुसी र उमङ्गको वातावरण बन्नेछ । सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ, पतिका साथमा वा पारिवारिक भ्रमणमा कतै घुमघामको अनुकूलता मिल्न सक्छ । छात्रछात्राले नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ ।
भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । मातृधन र पैत्रिक सम्पत्तिको उपयोगबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिने छ । पशुधन र जमिनबाट पनि सामान्य फाइदा होला । छात्रछात्राले पढाइमा त्यति मन नलगाए पनि कुनै न कुनै नयाँ कुरो सिक्ने मौका छ । बन्दव्यापार गर्नेहरूलाई सामान्य रूपमा फाइदा नै हुनेछ । कामदारहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । आम्दानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ । आज आवेश र घमण्डमाथि नियन्त्रण गर्न सकिंदैन, हतारमा स्वनिर्णयमा गरेको कामबाट फाइदा हुने देखिंदैन, त्यसैले संयम हुँदै कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि जान्ने बुझ्नेको राय ग्रहण गरेमा उपलब्धी हात पर्नेछ ।
आज समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिने छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । कीर्तिमानी काम गरी प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन र आँटेका काम पनि सजिलै सम्पादन हुनेछन। उद्योग तथा व्यापारमा विशेष फाइदा मिल्नेछ । विद्यार्थी र किशोर र किशोरीका लागि आफन्त र सँगीसाथीको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले नचिताएको काम बन्न सक्छ । गृहस्थीहरूले आज कमाएको धन दीर्घकालिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्नेछन । आज सबैका लागि पुरानो समस्यालाई निवारण गरी अघि बढ्ने समय हो । गृहिणीहरूले माइतीपक्षको शुभ समाचार सुन्न पाउने छन ।
चन्द्रमा चौथो भावमा पुगेको छ, बनिसकेको काम बिग्रन सक्छ, सचेत भई काम गर्नुपर्ने दिन छ । स्वास्थ्यमा कमजोरीको अनुभूति हुनसक्छ, तर कामधन्दा र जिम्मेवारीमा कमी आउने छैन । बाध्यतापूर्ण काममा समय बित्न सक्छ । श्रमको मूल्य कमै मात्र पाइने देखिन्छ, त्यस्तै आशा देखाउनेहरूले धोका दिन सक्छन । जान्नेबुझ्नेको सहयोग र सद्भाव पाउन गाह्रो हुन्छ, उता व्यावसायिक काममा खर्च बढ्ने र काम पूरा नहुनाले खिन्नता बढ्ने समय पनि छ । अतः होसियारीसाथ काम लिनुपर्ने समय छ । यद्यपि सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्न सक्छ । विदेशमा बस्नेका लागि नचिताएको आम्दानी हुने वा कामबाट फुर्सदिलो भएर मनोरञ्जन गर्ने दिन छ ।
सामाजिक र परोपकारी कामबाट नाम, दाम र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिने राम्रो दिन छ । रोकिएका कामलाई पुनः सुरु गर्ने वातावरण मिल्नेछ । सहयोगीहरूले अप्रत्यासित ढंगले सहयोग गर्नेछन । आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुनेछ । पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरी छाडिने छ । धैर्य एवं लगनशीलताले फाइदा दिलाउनेछ । सहयोगीहरूले साथ दिनेछन भने रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ गर्न सकिने छ । परिवारजनका आकाङ्क्षा पनि पूरा गर्न सकिने छ । छात्रछात्रा र अध्येताहरूका लागि आज प्राज्ञिक क्षमता बढ्ने समय देखिन्छ ।
आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि तथा पशुपालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिने छ । स्वास्थ्य सबल बन्नुका साथै काममा उत्साह जाग्नेछ । रोकिएका काम बन्नाले मनग्ये लाभ हुनेछ । चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिने छ । संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिने समय छ । छात्रछात्राहरूका लागि नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ, पढाइमा प्रगति हुनेछ । गृहिणीहरूको मन फुरुङ्ग हुने समय छ, इष्टमित्रको साथसहयोग मिल्नेछ ।
बाह्रौं भावमा चन्द्रमा भए पनि अन्य ग्रहको लाभकारी दृष्टि परेकाले अत्तालिई हाल्नु पर्ने परिस्थिति छैन । हरदम सचेत र सतर्क रहनु पर्छ, नत्र समयमा होस नपुग्नाले हुनै लागेको आम्दानीमा बाधा पुग्न सक्छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीको चलखेललाई सँगीसाथीको मद्दतले तोड्न सफल भइने छ । व्यापारीहरूले होसियारीसाथ काम लिनुपर्ने समय छ, तर लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिने छ । परदेशमा बस्नेहरूले रामरमाइलो र घुमघामको अवसर पाउने छन, तर केही रकम खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ । छात्रछात्राले गरेको कडा मिहिनेत र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
लाभ भावमा चन्द्रमा पुगे पनि आशलाग्दो समय देखिंदैन, यद्यपि कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सोचेको लाभ प्राप्त हुनेछ । कडा मिहिनेत र लगनशीलताका कारण रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन। प्रयास गर्दा नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ । तर ईष्र्या गर्नेहरूले सताउने दिन छ, बेलुकीपख अर्थअभावले गर्दा आँटेका काममा बाधा हुनसक्छ । शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दुःख पाइनेछ । परिवारजनबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । विद्यार्थी र युवायुवतिले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ ।
प्रयत्न गर्दा समयको सदुपयोग हुनेछ । सहयोगीहरूले काममा सहयोगको तत्परता देखाउनेछन । आस मारेको फल पुनः प्राप्त हुनसक्छ । गोप्य रहस्य पत्ता लगाउन सकिने समय छ । पछाडि बसेर कुरा काट्नेहरू अब चुप लाग्नेछन। नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । सानो प्रयत्नले पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिने छ । प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सकिने छ । विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिने छ । गृहिणीहरूले सन्तान पक्षबाट सहयोग पाउने समय हो । व्यवसायीहरूका लागि उद्योगधन्दा र व्यापारमा विशेष फाइदा हुने समय छ । विद्यार्थीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्ने समय छ ।
मिश्रित प्रभाव भएको दिन छ । यद्यपि आज आत्मविश्वास र हिम्मतका साथ अघि बढेमा भाग्यभावमा रहेको चन्द्रमाले साथ दिनेछ, कीर्तिमानी काम सम्पादन हुनसक्छ । कडा मिहिनेतपछि चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन भने कर्मयोग र आम्दानीले पछ्याउनेछन। धार्मिक अनुष्ठान तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापमा समय बित्नेछ । माङ्गलिक कार्य सम्पन्न गर्दा खर्चबर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिंदैन । फजुलको यात्रा र घुमघामको सम्भावना पनि देखिन्छ । घरिघरि मनमा निराशा र वैराग्यका बादल मँडारिने सङ्केत छ । जुनसुकै काम गर्दा सचेत र सावधान भएर गर्नुपर्छ, किनभने जस पाउने समय छैन, गरेका कामको सर्वत्र आलोचना हुनसक्छ ।
अष्टमस्थ चन्द्रमा रहेकाले इच्छाशक्ति जागे पनि चाहना पूर्ण हुने छैनन। काममा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र वादविवादमा रुमल्लिने समय आएको छ । आज विरोधी र प्रतिद्वन्द्वीहरूले तपाईंलाई अप्ठ्यारोमा पार्न ठूलै चलखेल गर्ने सङ्केत छ । त्यसैले सचेत हुनुपर्छ, जुनसुकै काम गर्दा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला । विपरीत लिङ्गीहरूबाट पनि सजग रहनुहोला । आर्थिक रूपमा नोक्सानी हुनसक्छ । कामबाट समुचित मूल्याङ्कन प्राप्त हुँदैन । परिवारजनसँगको आत्मीयतामा पनि कमी आउने छ । प्रेम सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन खुकुलो बन्न सक्छ । प्रयत्न गरेको काम समयमा सिद्ध्याउन सकिंदैन । बाटो काट्दा वा सवारी हाँक्दा सचेत हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २३, २०७७ समय: १९:५४:०५